IWebhusayithi yakho ayisiyiProjekthi | Martech Zone
NgoMvulo, nge-8 kaDisemba ngo-2014 Douglas Karr
Siphakathi ekuncedeni umthengi omtsha nge uyilo ngokutsha lwewebhusayithi. Indawo yabo yangoku ibonakala ngathi yenziwe kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye ibonakala injalo. Ihleliwe i-HTML ngaphandle kokuphendula, isakhiwo esinzima se-URL, kwaye akukho nkqubo yolawulo lomxholo emva kwayo. Ngelo xesha, indawo yayisisihombiso kwaye ndiqinisekile ukuba batyale imali eninzi kuyo - kodwa ayisebenzi kubo ngoku.
Kukho umzamo weqela kuyilo olutsha, olucothisa imveliso kuba luxhomekeke kwimvumelwano phakathi kwabadlali. Siqhelekile kwezi meko kwaye sisebenze ngobunzima ekulawuleni uyilo ngaphambili.
Umcimbi omnye ngokufanayo ayisiyiyo indawo okanye uyilo konke konke, iyatshintsha iparadigm yokuba Uyilo kwakhona lwewebhu yiprojekthi hayi inkqubo. Kukho ulindelo olubi lokuba yonke uyilo, yonke into yomxholo, kunye nayo yonke into yokuhamba kufuneka igqibelele.
Abayi kuba ngenxa yokuba ukusebenza kwewebhusayithi akunakuqikelelwa kude kube kuphila kwaye abasebenzisi bayasebenzisana nayo. Ndihlala ndiqhula neenkampani ukuba iwebhusayithi yazo iyiyo hayi eyabo - yeyabo batyeleleyo. Abanye bakufumanisa kuyinto ekhubekisayo njengoko bejonga indawo enophawu oluhle, indawo entle eye yasungulwa ngokugqibeleleyo njengoko beya kwenza umntwana wabo. Ngamanye amaxesha umntwana wabo; nangona intle, ayiqhubi kakuhle ngeklasi yonke.
Into emnandi malunga neenkqubo zangoku zokulawula umxholo kukuba unazo zonke izithako zewebhusayithi eyahlukileyo. Ukuba ukukhangela akusebenzi… akukho xhala… uyile entsha. Ukuba uyilo alusebenzi… fumana entsha. Ukuba umxholo awusebenzi, bhala umxholo omtsha.
At Highbridge, kunqabile ukuba sibhale ukubandakanyeka okusekwe kwiprojekthi kulwakhiwo ngokutsha lwesiza kuba siyaqonda ukuba indawo ifuna ixesha lokwenza kunye nokulinganiswa. Ubuncinci ubuncinci ziintsuku ezingama-90 ukuze ubuncinci sinokwenza naluphi na utshintsho olunokuthi luthintele ukubonakala kokhangelo kwaye lusinike ixesha lokutshintsha.
Kungenxa yoko le nto kunyanzelekile ukuba indawo yakho yakhelwe kwinkqubo yolawulo lomxholo eqinileyo ngawo onke amandla. Emva kokuqaliswa kwesiza sakho, kuya kufuneka ubuyele kumbhekisi kuphela ukuba ufuna amanqaku amatsha. Kodwa ubeko, ulawulo oluphezulu kunye ne-verbiage zonke zinokutshintshana ngumthengi.
Ukuba sisungula indawo entsha kwaye ayenzi bhetele okanye umthengi afumane uyilo olulungileyo, eyona nto intle kukuba sinokuhlala sisenza uhlengahlengiso- kokubini okuncinci okanye okukhulu. Ukuba ufuna ukuphumelela ugqatso, nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathe umhlalaphantsi kwimoto endala kwaye ufumane entsha kumkhondo wokuqalisa ukuvavanya.
tags: uyilo ngokutsha lwewebhusayithi